Macluumaadka ilaalinta macluumaadka, isticmaalka buskudka iyo afeef - www.amp-cloud.de
Ilaalinta xogta, cookies & deynta
Beddel goobaha ilaalinta xogta:
Isticmaal badhanka soo socda si aad u furto qoraalka qoraalka ee ku saabsan isticmaalka 'cookies', oo aad u isticmaali karto inaad ku beddesho goobaha ilaalinta macluumaadka la xiriira.
U beddel dejimaha isticmaalka cookie-ga
Mas'uuliyadda ku saabsan waxa ku jira www.amp-cloud.de:
Waxyaabaha ku jira bogagga www.amp-cloud.de waxaa loo abuuray si taxaddar leh. Dammaanad looma siinayo saxsanaanta, dhammaystirka iyo mawduucyada waxyaabaha ku jira. Bixiye adeeg ahaan, mas'uuliyadda sida ku xusan Para 7 Faqrada 1 TMG ee ku saabsan waxyaabaha u gaarka ah ee bogagga www.amp-cloud.de waxay khuseysaa si waafaqsan sharciyada guud. Sida ku xusan Qeybaha 8 illaa 10 ee TMG, ma jiro wax waajib ah oo adeeg bixiye ah inuu kormeero ama la keydinayo macluumaadka dhinac saddexaad ama duruufaha cilmi baarista ee tilmaamaya falalka sharci darrada ah. Waajibaadka saaran in laga saaro ama la joojiyo adeegsiga macluumaadka iyadoo la raacayo sharciyada guud wali saameyn kuma laha. Si kastaba ha noqotee, mas'uuliyadda tixraacan ayaa suurtagal ah ugu horreyntii laga bilaabo waqtiga aan ku ogaanno xadgudub sharci oo gaar ah. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan uga warqabno xadgudubyada sharci ee u dhigma, waxyaabahaan ayaa laga saari doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Mas'uuliyadda ku saabsan xiriiriyeyaasha shabakadda www.amp-cloud.de:
Dalabkan ka socda www.amp-cloud.de waxaa laga yaabaa inuu ku jiro xiriiriyeyaal websaydhada saddexaad ee dhinac saddexaad ah oo cidda ay ka kooban tahay www.amp-cloud.de aysan wax saamayn ah ku lahayn. Sidaa darteed wax dammaanad ah lama siinayo nuxurkan dibedda ah. Bixiyaha ama hawlwadeenka bogagga ayaa had iyo jeer mas'uul ka ah waxyaabaha ka kooban bogagga isku xiran. Haddii aan ogaano xadgudubyada sharciga ah, xiriiriyeyaasha noocan oo kale ah ayaa laga saari doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Mawduucyada iyo shaqooyinka ay sameeyeen hawlwadeenka websaydhada bogagga www.amp-cloud.de waxay ku xiran yihiin sharciga xuquuqda lahaanshaha Jarmalka Soo-saarista, farsamaynta, qaybinta iyo nooc kasta oo dhiig-miirasho ah oo ka baxsan xadka sharciga xuquuqda daabacaadda waxay u baahan tahay oggolaansho qoraal ah oo qoraaga, abuuraha ama hawl wadeenka. Soo dejin kasta iyo nuqullo ka mid ah degelkan waxaa loo oggol yahay oo keliya adeegsi gaar ah. Nooc kasta oo adeegsiga ganacsiga ah waa mamnuuc iyada oo aan ogolaansho deg deg ah laga helin qoraaga saxda ah! Marka laga hadlayo waxyaabaha ku jira bogagga www.amp-cloud.de ee uusan abuurin hawl wadeenka websaydhka laftiisa, xuquuqda lahaanshaha ee dhinacyada saddexaad ayaa la eegaa. Ujeedadaas awgeed, waxyaabaha ka kooban qeybta saddexaad ayaa loo calaamadeeyay sida oo kale. Haddii ku xadgudubka xuquuqda lahaanshuhu si kasta u muuqdo, waxaan kaa codsan doonnaa inaad na soo wargeliso si waafaqsan. Haddii aan ogaano xadgudubyada sharciga ah, waxyaabaha noocaas ah waa laga saarayaa sida ugu dhakhsaha badan.
Ilaalinta xogta jaleeco:
Macluumaadka soo socdaa wuxuu bixinayaa aragti guud oo fudud oo ku saabsan waxa ku dhacaya xogtaada shakhsi ahaaneed markaad booqato degelkeenna. Xogta shaqsiyeed waa dhammaan macluumaadka shaqsiyan lagugu aqoonsan karo. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mawduuca ilaalinta xogta waxaa laga heli karaa bayaankayaga ilaalinta xogta ee ka hooseeya qoraalkan.
Xog ururinta websaydhkayaga
Ayaa ka mas'uul ah xog ururinta degelkan?
Ka shaqeynta xogta boggan waxaa fuliya hawlwadeenka websaydhka. Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta xiriirkooda daabacaadda degelkan.
Sideen u ururinaa xogtaada?
Dhinaca kale, xogtaada ayaa la uruuriyaa markaad na siiso. Tani waxay noqon kartaa, tusaale ahaan, xogta aad geliso foomka xiriirka.
Xogta kale waxaa si otomaatig ah u duubaya nidaamyadeenna IT-ga markii aad booqato websaydhka. Tani badanaa waa xog farsamo (tusaale, biraawsarka internetka, nidaamka hawlgalka ama waqtiga bogga la fiirinayo). Xogtan waxaa si otomaatig ah loo soo uruuriyaa isla marka aad gasho degelkeenna.
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaad ku saabsan asalka, qaataha iyo ujeedka xogtaada shaqsiga ah ee aad kaydisay bilaash markasta. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato sixitaanka, xannibaadda ama tirtirka xogtaan. Waxaad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta cinwaanka lagu siiyay ogeysiiska sharciga haddii aad wax su'aalo ah oo dheeri ah ka qabtid ilaalinta xogta. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad dacwad ka gudbiso hey'adda kormeerka ee awooda u leh.
Qalabka falanqaynta iyo qalabka saddexaad
Markaad booqato degelkeenna, dabeecaddaada duufsiga waxaa lagu qiimeyn karaa tirakoob ahaan. Tan waxaa badanaa lagu sameeyaa buskudka iyo barnaamijyada loogu yeero falanqaynta. Dhaqankaaga dabaasha waxaa badanaa lagu falanqeeyaa si qarsoodi ah; Dabeecadda dabaasha laguma soo celin karo adiga. Waad ku diidi kartaa falanqeyntan ama waad ka hortagi kartaa adiga oo aan isticmaalin qalab gaar ah. Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo arrintan ku saabsan bayaanka ilaalinta macluumaadka soo socda.
Waad diidi kartaa falanqeyntan. Waxaan kugula socodsiin doonaa fursadaha diidmada ee bayaanka ilaalinta macluumaadka.
Macluumaadka guud iyo macluumaadka qasabka ah:
Hawl wadeenada shabakadan waxay si dhab ah u tixgelinayaan ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaan ula dhaqmeynaa macluumaadkaaga shaqsiyeed si qarsoodi ah oo waafaqsan sharciga qawaaniinta ilaalinta xogta iyo bayaanka ilaalinta macluumaadka.
Markaad isticmaaleyso degelkan, waxaa la aruurinayaa xog shaqsiyadeed oo kala duwan. Xogta shaqsiyadeed waa xog si shaqsi ahaaneed lagugu aqoonsan karo. Bayaankaan ilaalinta xogta wuxuu sharaxayaa xogta aan aruurino iyo waxa aan u isticmaalno. Waxay kaloo sharraxeysaa sida iyo ujeeddada tan loo sameeyay.
Waxaan farta ku fiiqnay in xogta la isugu gudbiyo internetka (tusaale ahaan markii e-mailka lagu wada xiriirayo) ay yeelan karto dulduleelo xagga amniga ah. Ilaalin buuxda oo xog ah oo ka dhan ah helitaanka dhinacyada saddexaad macquul ma ahan.
Xusuusin jirka masuulka ka ah
Hay'adda masuulka ka ah ka shaqaynta xogta boggan waa:
Hay'adda masuulka ahi waa qofka dabiiciga ah ama sharciga ah ee keligiis ama si wada jir ah ula leh dadka kale, go'aansada ujeeddooyinka iyo hababka loo adeegsado ka shaqeynta xogta shakhsiga ah (sida magacyada, cinwaanada emaylka, iwm.).
Kala noqoshada ogolaanshahaaga ka shaqeynta xogta
Hawlgallo badan oo ka baaraandegidda xogta ah ayaa suurtogal ah oo keliya haddii aad oggolaato. Waad ka noqon kartaa ogolaanshahaaga wakhti kasta. E-mayl aan rasmi ahayn ayaa noogu filan. Sharci ahaanta ka shaqeynta xogta la qabtay kahor burinta wali saameyn kuma yeelan dib u noqoshada.
Xuquuqda rafcaanka ee hey'adda kormeerka ee awooda leh
Haddii ay dhacdo xadgudubyada ilaalinta xogta, qofka ay khusayso wuxuu xaq u leeyahay inuu cabasho u gudbiyo hay'adda kormeerka ee awoodda u leh. Awoodda kormeerka ee karti u leh arrimaha ilaalinta xogta waa sarkaalka ilaalinta xogta gobolka ee dowladda federaalka ee ay shirkadeena ku taal. Liiska saraakiisha ilaalinta xogta iyo faahfaahinta xiriirkooda waxaa laga heli karaa xiriirka soo socda: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Xaq u lahaanshaha xogta
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho xog aan si otomaatig ah ugu shaqeyno iyadoo ku saleysan ogolaanshahaaga ama fulinta heshiis laguu wareejiyay adiga ama cid saddexaad oo qaab guud ah, oo mashiin lagu akhrin karo ah. Haddii aad codsato in si toos ah loogu wareejiyo xogta qof kale oo mas'uul ah, tan waxaa la sameyn doonaa oo keliya haddii ay farsamo ahaan macquul tahay.
Macluumaadka, xannibaadda, tirtirka
Inta lagu gudajiro qodobada sharciga quseeya, waxaad xaq u leedahay inaad si bilaash ah uga hesho macluumaadkaaga shakhsiga ah ee aad keydisay, asal ahaan iyo cidda heleysa iyo ujeedada ka shaqeynta xogta iyo haddii loo baahdo xaq u leedahay inaad saxdo, xayirto ama tirtirto xogtaan. Waxaad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta cinwaanka lagu siiyay ogeysiiska sharciga ah haddii aad wax su'aalo dheeraad ah ka qabtid mowduuca xogta shaqsiga ah.
Diidmada waraaqaha xayeysiinta
Waxaan halkan ka diideynaa isticmaalka macluumaadka xiriirka ee lagu daabacay macnaha guud ee waajibaadka daabacaadda ee dirista xayeysiiska iyo macluumaadka macluumaadka aan loo baahnayn. Hawlwadeennada bogagga waxay si cad u xaq u leeyihiin inay tallaabo sharci ka qaadaan haddii ay dhacdo diritaan aan la weydiisan oo ah macluumaadka xayeysiinta, sida e-mayllada spam.
Xog ururinta boggayaga:
Bogagga internetka qaarkood ayaa adeegsada waxa loogu yeero cookies. Kukiyada waxyeello uma geysato kombuyuutarkaaga kumana jiraan fayrasyo. Kukiyada waxay u adeegaan inay ka dhigaan dalabkeenna mid adeegsade-saaxiibtinimo badan, waxtar badan oo ammaan ah. Kukiyada waa faylal qoraal yar oo ku kaydsan kumbuyuutarkaaga oo keydiya biraawsarkaaga.
Kukiyada badan ee aan isticmaalno waxaa loogu yeeraa "cookies cookies". Si toos ah ayaa loo tirtiraa booqashadaada kadib. Kukiyada kale ayaa ku sii jiraya qalabkaaga illaa aad tirtirto. Kukiyadaani waxay noo suurtagelinayaan inaan aqoonsanno biraawsarkaaga marka xigta ee aad booqato.
Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si lagugu wargaliyo ku saabsan dejinta cookies-ka oo kaliya u oggolaato cookies-ka kiisaska shaqsiyadeed, ka reebitaanka aqbalaadda cookies ee kiisaska qaarkood ama guud ahaan, oo aad dhaqaajiso tirtirka otomaatiga ah ee cookies markii aad xireyso biraawsarka. Haddii cookies-ka la demiyey, shaqeynta websaydhkan waa la xadidi karaa.
Kukiyada loo baahan yahay si ay u fuliyaan habka isgaarsiinta elektiroonigga ah ama ay u bixiyaan shaqooyin gaar ah oo aad rabto (tusaale ahaan howlaha gawaarida dukaameysiga) waxaa lagu keydiyaa iyadoo lagu saleynayo Qod. 6 Para. f GDPR waa la keydiyay Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu kaydiyo buskudka si farsamo ahaan qalad-la'aan ah iyo adeegyo la hagaajiyay. Ilaa inta ay kuukiyadaha kale (tusaale ahaan, cookies for Falanqaynta dhaqankaaga duufsan) la keydiyey, kuwan waxaa loola dhaqmi doonaa si gooni gooni ah bayaanka ilaalinta macluumaadka.
Qaybta cookie ee "Function"
Kukiyada ku jirta qaybta "Function" ayaa si buuxda u shaqeynaya oo lagama maarmaan u ah hawlgalka bogga ama hirgelinta shaqooyinka qaarkood. Bixiyeyaasha qaybtaan sidaa darteed lama demin karo.
Nooca cookie "isticmaalka"
Kukiyada ku jirta qaybta "Isticmaalka" waxay ka yimaadeen bixiyeyaasha bixiya howlo gaar ah ama nuxur ahaan, sida howlaha warbaahinta bulshada, waxyaabaha fiidiyowga ku jira, farta iwm. .
Qaybta cookie ee "Cabbiraadda"
Kukiyada ka tirsan qaybta "Cabbiraadda" waxay ka yimaadaan bixiyeyaasha falanqeyn kara gelitaanka degelka (si qarsoodi ah, dabcan). Tani waxay bixinaysaa aragti guud oo ku saabsan waxqabadka websaydhka iyo sida ay u kobcayaan. Tan tan, tallaabooyinka ayaa laga soo qaadan karaa, tusaale ahaan, si loo hagaajiyo goobta muddada fog.
Qaybta buskudka ee "Maalgelinta"
Kukiyada ka socota qaybta "Maalgelinta" waxay ka yimaadaan bixiyeyaasha adeegyadooda ay maalgeliyaan kharashka hawlgalka iyo qayb ka mid ah websaydhka ay bixiso. Tani waxay taageertaa sii jiritaanka websaydhka.
Bixiyaha websaydhadu si otomaatig ah ayuu u ururiyaa uguna kaydiyaa macluumaadka faylalka loo yaqaan 'server log files', oo biraawsarkaagu si toos ah noogu soo gudbiyo. Kuwani waa:
Nooca biraawsarka iyo nooca biraawsarka
nidaamka qalliinka loo isticmaalo
Magaca martigeliyaha kombiyuutarka marin u helka
Waqtiga codsiga serverka
Xogtaan laguma darin ilaha xogta kale.
Xogtaan waxaa lagu duubay iyadoo lagu saleynayo Qod. 6 Faqrada 1aad lit. f GDPR. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo ku saabsan soo bandhigista farsamo ahaan qalad-la'aanta iyo hagaajinta degelkiisa - faylasha faylasha serverka waa in lagu qoro tan.
Qalabka Facebook (like & share button)
Plugins ee shabakada bulshada ee Facebook, bixiyaha Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, ayaa lagu soo daray boggeena. Waxaad ku aqoonsan kartaa waxyaabaha kujira Facebook astaanta Facebook ama badhanka "Like" ee boggayaga internetka. Waxaad ka heli kartaa muuqaalka guud ee waxyaabaha ku xiran Facebook halkan: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Markaad booqato websaydhkeena, fur-gelintu waxay dejisaa xiriir toos ah oo u dhexeeya biraawsarkaaga iyo server-ka Facebook. Sidaas darteed, Facebook waxay heshaa macluumaadka aad ku soo booqatay boggayaga cinwaankaaga IP -ga. Haddii aad gujiso badhanka “Like” ee Facebook inta aad ku jirto xisaabtaada Facebook, waxaad ku xiriirin kartaa waxa ku jira bogaggayaga astaantaada Facebook. Tani waxay awood u siineysaa Facebook inuu booqashadaada ku meeleeyo koontadaada koontadaada isticmaale. Waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaamno, annaga oo ah bixiyeyaasha bogagga, wax aqoon ah uma lihin nuxurka xogta la soo gudbiyey ama adeegsigooda Facebook. Waxaad ka heli kartaa macluumaad intaas ka badan bayaankan ilaalinta xogta Facebook ee: https://de-de.facebook.com/policy.php
Haddii aadan rabin inaad Facebook awood u yeelatid booqashadaada boggayaga koontadaada isticmaale Facebook, fadlan ka bax koontadaada isticmaale Facebook.
Qalabka Google +
Bogaggayagu waxay adeegsadaan howlaha Google+. Bixiyaha waa Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aruurinta iyo faafinta macluumaadka: Waxaad isticmaali kartaa badhanka Google+ si aad ugu daabacdo macluumaadka adduunka oo dhan. Adiga iyo isticmaaleyaasha kaleba waxaad ka heshaan macluumaadka shakhsi ahaaneed Google iyo la-hawlgalayaashayada adoo adeegsanaya badhanka Google+. Google wuxuu kaydiyaa labadaba macluumaadka aad siisay +1 wixii ku saabsan iyo macluumaadka ku saabsan bogga aad daawatay markii aad riixday +1. +1-kaaga waxaa lagusoo bandhigi karaa si maldahan ayagoo wadajira magacaaga astaanta iyo sawirkaaga adeegyada Google, sida natiijooyinka raadinta ama boggaaga Google, ama meelaha kale ee websaydhada iyo xayeysiinta internetka.
Google waxay diiwaangelisaa macluumaadka ku saabsan +1 hawlahaaga si loo horumariyo adeegyada Google adiga iyo kuwa kaleba. Si aad u awoodo inaad isticmaasho badhanka Google+, waxaad u baahan tahay muuqaal caalami ah, muuqaal guud oo Google ah oo ay ku jiraan ugu yaraan magaca loo doortay astaanta. Magacaani waxaa loo adeegsadaa dhammaan adeegyada Google. Xaaladaha qaarkood, magacani sidoo kale wuu beddeli karaa magac kale oo aad isticmaali jirtay markii aad wax ku wadaagaysay koontadaada Google. Aqoonsiga astaantaada guud ee Google ayaa la tusi karaa dadka isticmaala ee garanaya cinwaanka iimaylkaaga ama haysta macluumaad kale oo kugu saabsan oo lagugu aqoonsan karo.
Isticmaalka macluumaadka la soo ururiyay: Marka lagu daro ujeedooyinka kor lagu soo sheegay, macluumaadka aad bixiso waxaa loo isticmaali doonaa iyadoo la raacayo qodobbada ilaalinta xogta Google ee khuseeya. Google waxaa laga yaabaa inay daabacdo tirakoob kooban oo ku saabsan +1 howlaha isticmaaleyaasha ama ay u sii gudbiyaan adeegsadayaasha iyo la-hawlgalayaasha, sida daabacayaasha, xayeysiistayaasha ama degellada ku xiran.
Qalabka falanqaynta iyo xayeysiinta:
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa shaqooyinka adeegga falanqaynta websaydhka Google Analytics. Bixiyaha waa Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics waxay isticmaashaa waxa loogu yeero "cookies". Kuwani waa feylal qoraal ah oo ku kaydsan kombuyuutarkaaga oo awood u siinaya isticmaalkaaga bogga in la falanqeeyo. Macluumaadka ay soo saartay cookie-ka ee ku saabsan isticmaalka degelkan waxaa badanaa loo wareejiyaa server-ka Google ee ku yaal Mareykanka oo halkaas ayaa lagu kaydiyaa
Kaydinta kukiyada Google Analytics waxay ku saleysan tahay Qod. 6 Para. 1 lit.f GDPR. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu falanqeeyo dabeecadaha isticmaalaha si loo wanaajiyo websaydhkiisa iyo xayeysiiskiisa
Waxaan ku hawlgalnay hawsha qarsoodiga IP-ka websaydhkan. Natiijo ahaan, cinwaankaaga IP waxaa soo gaabin doona Google gudaheeda wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub ama dowladaha kale ee qandaraaska la galaya heshiiska ku saabsan Aagga Dhaqaalaha Yurub ka hor inta aan loo gudbin USA. Cinwaanka IP-ga oo buuxa waxaa kaliya loogu gudbiyaa server-ka Google ee USA waxaana lagu soo gaabiyey halkaas xaalado aan caadi ahayn. Aniga oo ku hadlaya magaca hawl wadeenka degelkan, Google waxay u adeegsan doontaa macluumaadkan si ay u qiimeyso isticmaalkaaga websaydhka, si ay u soo uruuriso warbixinnada ku saabsan waxqabadka websaydhka iyo inay u siiso hawlwadeenka websaydhada adeegyo kale oo la xidhiidha waxqabadka websaydhka iyo isticmaalka internetka. Cinwaanka IP-ga ee uu gudbiyo biraawsarkaaga oo qayb ka ah Google Analytics laguma biiri doono xogta kale ee Google.
Waad ka hortagi kartaa keydinta buskudka adigoo dejinaya softiweerka biraawsarkaaga si waafaqsan; si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaanno in xaaladdan laga yaabo inaadan awoodin inaad isticmaasho dhammaan howlaha websaydhkan inta ay ka kooban yihiin. Waxaad sidoo kale ka hortagi kartaa Google inuu ururiyo xogta ay soo saartay buskudka iyo la xiriirta isticmaalkaaga bogga (oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP-ga) iyo inuu ka baaraandego xogtan Google adoo soo degsanaya furaha furaha ee laga heli karo iskuxiraha soo socda oo rakib: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Diidmada xog aruurinta
Waad ka hortagi kartaa Google Analytics inay ururiyaan xogtaada adoo gujinaya badhanka hoose. Tani waxay muujineysaa macluumaadka iyo xulashada dejinta adeegsiga buskudka, adigoo gujinaya "" waad baabi'isay, iyo waxyaabo kale, ururinta xogtaada koontadayada Google Analytics:
Muuji xulashooyin si aad uga shaqeyso Google Analytics
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida Google Analytics ay u maareeyaan xogta isticmaale ee siyaasadda asturnaanta Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Dalbo ka shaqeynta xogta
Waxaan ku soo gabagabeynay heshiiska wax ka qabashada xogta qandaraaska Google iyo inaan si buuxda u fulino shuruudaha adag ee mas'uuliyiinta ilaalinta xogta Jarmalka markaad isticmaaleyso Google Analytics.
Astaamaha dadka ee ku jira Google Analytics
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa "sifooyinka dadka" ee Google Analytics. Tani waxay u oggolaaneysaa warbixinno la abuuro oo ay ku jiraan macluumaadka da'da, jinsiga iyo danaha booqdayaasha bogagga. Xogtaan waxay ka timid xayeysiinta dulsaarka ku saleysan ee Google iyo sidoo kale xogta booqdaha ee bixiyeyaasha saddexaad. Xogtaan looma xilsaari karo qof gaar ah. Waad ka joojin kartaa shaqadan wakhti kasta adoo adeegsanaya goobaha xayeysiiska ee koontadaada Google ama guud ahaan waad mamnuuci kartaa ururinta xogtaada Google Analytics sida lagu sharxay qaybta "Diidmada xog aruurinta". Websaydhkani wuxuu adeegsadaa "sifooyinka dadka" ee Google Analytics. Tani waxay u oggolaaneysaa warbixinno la abuuro oo ay ku jiraan macluumaadka da'da, jinsiga iyo danaha booqdayaasha bogagga. Xogtaan waxay ka timid xayeysiinta dulsaarka ku saleysan ee Google iyo sidoo kale xogta booqdaha ee bixiyeyaasha saddexaad. Xogtaan looma xilsaari karo qof gaar ah. Waad furi kartaa shaqadan wakhti kasta adoo adeegsanaya goobaha xayeysiiska ee koontadaada Google ama guud ahaan waad mamnuuci kartaa ururinta xogtaada Google Analytics sida lagu sharaxay barta "Diidmada xog aruurinta".
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa Google AdSense, oo ah adeeg isku-darka xayaysiisyada ka socda Google Inc. ("Google"). Bixiyaha waa Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google AdSense waxay isticmaashaa waxa loogu yeero "cookies", faylalka qoraalka ee ku kaydsan kombuyuutarkaaga oo u oggolaanaya falanqaynta isticmaalka bogga. Google AdSense sidoo kale waxay isticmaashaa waxa loogu yeero shumacyada websaydhka (sawirada aan muuqan). Nalalka shabakaddan waxaa loo isticmaali karaa in lagu qiimeeyo macluumaadka sida taraafikada booqdayaasha bogaggaan.
Macluumaadka ay soo saaraan cookies iyo beakons webka ee ku saabsan isticmaalka websaydhkan (oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP-ga) iyo gudbinta qaababka xayeysiiska ah ayaa loo gudbiyaa oo lagu kaydiyaa Google on server-yada Maraykanka. Macluumaadkan waxaa u gudbin kara Google shirkadaha la shaqeeya qandaraaska ee Google. Si kastaba ha noqotee, Google kuma biiri doonto cinwaankaaga IP-ga xogta kale ee kugu kaydsan adiga.
Kaydinta buskudda 'AdSense' waxay ku saleysan tahay Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu falanqeeyo dabeecadaha isticmaalaha si loo wanaajiyo websaydhkiisa iyo xayeysiiskiisa
Waad ka hortagi kartaa rakibidda buskudka adoo u dejinaya softiweerka biraawsarkaaga si waafaqsan; si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaanno in xaaladdan laga yaabo inaadan awoodin inaad adeegsato dhammaan howlaha websaydhkan illaa inta ay ka buuxaan. Adiga oo isticmaalaya degelkan, waxaad oggolaatay ka shaqeynta xogta ay adiga kaa soo aruurisay Google qaabka kor lagu soo sheegay iyo ujeeddada kor lagu sheegay.
Plugins iyo qalab:
Boggan wuxuu adeegsadaa waxa loogu yeero noocyada websaydhka, oo ay bixiso Google, si loogu muujiyo qaab isku mid ah noocyada. Markaad u yeerto bogga, biraawsarkaagu wuxuu ku xiraa noocyada websaydhka loo baahan yahay kaydka biraawsarkaaga si uu si sax ah ugu muujiyo qoraallada iyo noocyada.
Ujeedadaas awgeed, biraawsarka aad isticmaaleyso waa inuu ku xirnaadaa server-yada Google. Tani waxay siinaysaa aqoonta Google in degelkeenna laga soo galay adresskaaga IP-ga. Google Web Fonts waxaa loo adeegsadaa iyadoo loo daneynayo soo bandhigid labis iyo soo jiidasho leh oo ku saabsan dalabkeena internetka. Tani waxay u taagan tahay dano sharci ah oo ku jirta macnaha Qod. 6 Para. 1 lit.f GDPR.
Haddii biraawsarkaagu aanu taageerin noocyada websaydhka, farta caadiga ah ayaa kombiyuutarkaagu isticmaali doonaa.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xarfaha Webka Google waxaa laga heli karaa https://developers.google.com/fonts/faq iyo siyaasadda gaarka ah ee Google: